Simon Scarrow: "Vanyori vazhinji vachatambura mumakore mashoma anotevera." | Zvazvino Zvinyorwa
Simon Scarrow: "Vanyori vazhinji vanozove nematambudziko mumakore mashoma anotevera."
Mufananidzo: Simon Scarrow. Profiles on Facebook uye Twitter.
Simon Scarrow haadi kuiswa. Zvirokwazvo kwete kana iwe uchifarira nhoroondo yenhoroondo. Zvakaoma kuwana muverengi werudzi uyo asina kuverenga, zvirinani, mumwe wevanozivikanwa kwazvo protagonists, Mauto eRoma Chechishanu Licinius Cato uye shamwari yake yakatendeka Lucius Cornelius Macro. Uye ivo vatove nemazita gumi nemanomwe. Zvanga zva mufaro chaiwo kundipa izvi indavhiyu uye ndinokutendai zvikuru nekuda kwemutsa uye nguva yakashandiswa. Ndotenda kwazvo, VaScarrow. (Bilingual vhezheni)
Pamusoro pechikamu chakateedzana naCato naMacro, akanyora zvakare iyo nhepfenyuro dzevechidiki Gladiator, uye matatu enganonyorwa akazvimirira: Bakatwa nechimonera, Ropa pajecha y Mwoyo wedombo. Uye pamwe chirongwa chake chinonyanya kufarira ndeye tetralogy nezve hupenyu hwakafanana hwe Napoleon Bonaparte uye Mutongi weWellington: Ropa diki, Vakuru, Nemoto uye nemunondo y Kuuraya minda.
Pamwe naLee Francis, ine chinonakidza Kutamba nerufu, ane nyeredzi Rose Blake, FBI mumiriri akasarudzika.
KUKURUKURA NASIMONI SCARROW
BHUKU NEWS: Unoyeuka here bhuku rekutanga rawakaverenga? Uye nyaya yekutanga iwe yawanyora?
SIMON SCARROW: Bhuku rekutanga randinorangarira ndichiverenga rakanga riri mune akateedzana e Zvakavanzika Zvinomwe, ivo Enid Blyton. Ndinoyeuka ndichizvikudza kwazvo pachangu nekuverenga bhuku rese uye kubva ipapo zvichienda mberi ndakawana iro bhagi! Uye kusvikira zvino.
Ini handirangarire nyaya yekutanga yandakanyora. Zvisinei, ndaifarira kutaura nyaya kubva pamakore masere pandakatumirwa kune internship. Mushure mekunge magetsi adzima mubedroom, takachinjana kuudzana. Zvino humwe husiku, ndakafunga kukanganisa nyaya yacho ndoisiya mu nguva yekupedzisira, achivimbisa kuenderera husiku hunotevera. Pasina nguva ndakazviwana ndave kuita basa zvizere. Izvo zvakandidzidzisa kutaura nyaya. Waiziva rini Ndakanga ndichiita zvakanaka nekuti munhu wese aive akanyarara uye achiteerera. Mushure meizvozvo, ndakawedzera kunakidzwa nekunyora nyaya dzechikoro uye zvekunakidzwa.
SIMONI SCARROW: Mubvunzo unonakidza. Ndakanga ndiine huatus pakuverenga kubva pamakore gumi kusvika gumi nemaviri uye rimwe zuva ndaive kurwara uye handina kuenda kuchikoro uye Ndakatora bhuku iyo mukoma wangu mukuru anga atora kubva kuraibhurari. Zvanga zviri The Wolfen, de Whitley rwizi, kuongororwa kwakagadziridzwa kwenyaya yewolf. Zvakandiramba ndakakochekera uye kutya uye nazvo Ndakaverenga ndakangogara.
Munguva pfupi yapfuura Zvandishamisa basa re Yasmine Khadra, iro zita rekunyepedzera remunyori weAlgeria. Zvinoshamisa zvakanaka Uye zviri kuzvininipisa semunyori kutsvaga mumwe munhu anozviita zviri nani kwazvo kupfuura iwe.
SIMONI SCARROW: Mubvunzo wakaoma. Kufanana nesarudzo dzese dzandinofarira dzechinhu chero chipi zvacho, zvinoshanduka nguva nenguva sekuchinja kwandinoita. Dai ndaifanira kusarudza, Shakespeare angave wekutanga pane angu runyorwa nekuda kwenyaya yemashoko ake uye kudzika kwekunzwisisa kwavo chimiro chemunhu. Ndakanakidzwawo nebasa re Firipi K. Dick y Alan MooreVakapenya, vanyori vakamutsa nyika dzinomutsa kufunga.
HH: Sherlock Holmes! Ndakaverenga nyaya dzese pandaive kuchikoro uye izvo zvakandizivisa kune mutikitivha uye mutikitivha fungidziro. Me encantó iyo nyoro mutikitivha nehunhu hwake hwehunhu uye, zvakanaka, mamwe maitiro ...
HH: Peanut butter sandwiches uye girazi re scotch whiskey pamatombo pano neapo. Zvakare, ini ndinowanzozvipa mubairo neakanaka ice cream kubva appetizers Wasabi pandinopedza chitsauko. Imwe mhando yemubairo webasa!
SS: Mubvunzo wakareruka. Pasina kupokana, nzvimbo yangu yandinofarira ndeye Villa Jovis pachitsuwa che Capri. Pandakatanga kuenda ikoko ndaive ndega kweinenge awa kana zvakadaro, ndakagara pabhenji remabhuru padhuze nemucheto wewere ndikatarisa kugungwa nechepazasi apo mafungu akarovera pamatombo, ndikazotarisa kumhiri kwegungwa kusvika Sorrento uye bay ye Naples kupfuura. Yakanga iri nguva yakanaka uye ine rugare uye ndakanyatsonzwisisa kuti sei madzimambo aida chiwi nekuona kwaro. Iko kuuraya, sekutaura kwavo kuUK.
SS: Mubasa rangu vaizove Rosemary sutcliff y Gondo reLegion Rechipfumbamwe, rakajeka bhuku remunyori uyo anofungidzira zvakapfuura muhupenyu hwakasimba kune vaverengi. Ini ndaimboida ndichiri mudiki, ipapo ndakaverengera vana vangu uye ipapo chete ndipo pandakaona simba rekunyora kwayo.
HH: Ngano dzesainzi, the genhema nero uye isiri ngano, kunyanya Ensayo tsika nemagariro.
SS: Izvozvi ndapedza iyo inoshamisa Kurwisa, by (Yasmina) Khadra uye ndiri kufamba kuburikidza neyekutanga yematsotsi angu emanoja.
AL: Iwe unofunga sei mushambadziro wekutsikisa / panorama iri? Vanyori vakawandisa vari kuyedza kutsikisa? Kana nzira dzakawandisa dzekuzviita?
SS: Pane inoshamisa huwandu yemabhuku akatsikirirwa, anova Chinangwa. Asi vazhinji kubva kwavari havakwanise kuita mari, izvo zvakashata kune vanyori vanofarira (kunyange vamwe, pamwe, vangangokodzera kubudirira). Saizvozvo, zviripo vanyori vakanaka zvavanoita Zvakanaka uye vamwe zvinoshamisa malos Vanoitei pfuma. Sezvo muindasitiri yemafirimu uye nekuvandudzwa kwemashandisi emakomputa hapana anoziva sei mamwe magwaro aine kubudirira uye vamwe havadaro. Ndinofungidzira izvozvo denda richamanikidza vapepeti kudimbura zvinyorwa zvavo zve chengetedza mari y vanyori vakawanda ndichave matambudziko mumakore anotevera.
HH: Hupenyu hwangu hauna kuchinja zvakanyanya Parizvino, nekutenda. Kufanana nevanyori vazhinji, Ndiri zvishoma mumiriri uye ndinoshandisa yakawanda yenguva kunyora ndega, kuenda ku udye, Enda kunorara izvozvi kufamba imbwa. Ini ndinotenga kamwe pasvondo, sepakutanga, izvozvi chete ini ndinopfeka mask uye magurovhosi. Ndinoshuva kuti dai ndaigona kuona vabereki vangu nehanzvadzi yangu (Alex Scarrow, zvakare munyori wenhema sainzi) vanogara mutaundi riri padyo.
Izvozvi ndiri kunyora a nyowani yechiroma inoiswa muSardinia, uko kwave kuputika denda uye mafuta asingabatsiri, gavhuna-bvudzi-bvudzi haakwanise kubata naye. Handina zano kuti kurudziro yakadaro inobva kupi ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Simon Scarrow: "Vanyori vazhinji vanozove nematambudziko mumakore mashoma anotevera."